रेखाको मन किन अमेरिका तिर ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
रेखाको मन किन अमेरिका तिर ?
एक साताअघि आफ्नी आमासंग नायिका रेखा थापा अमेरिका भ्रमणमा गइन् । भ्रमणका क्रममा अमेरिकाबाट उनले आफ्नो फेसबुकमा घुमघामका रमाइला तस्विरहरु पनि सार्वजनिक गरिन् । आफुले बनाएको बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘हिम्मतवाली’ लाई प्रमोशन गर्न छाडेर अमेरिका पुगेपछि कतै रेखाले कम ध्यान दिएको पो हो की भन्ने चर्चा पनि गसिप बजारमा नभएको होइन् ।
तर आइतवार (भदौ २२) नेपाल फर्किएकी रेखाले व्यत्तिगत एवं व्यवसायिक भ्रमणमा अमेरिका पुगेको जनाउँदै अब पुरा समय ‘हिम्मतवाली’ लाई दिने बताएपछि त्यो चर्चा सकिएको छ । आउँदो असोज १ गते फिल्म ‘हिम्मतवाली’ को ग्रान्ड प्रेस शो गर्ने जानकारी दिंदै रेखाले भनिन्, ‘अब पुरै ध्यान हिम्मतवाली प्रचार प्रसारमा दिन्छु ।’
आफुले अमेरिकामा व्यवसाय सञ्चालनको केही योजना बनाइरहेको पनि रेखाले बताइन् । व्यवसायका विषयमा उनले सबै कुरा भने खोल्न चाहिनन् । भनिन्– ‘अरु कुरा पछि सार्वजनिक गरौँला । ’ रेखासँगै अमेरिका उडेकी आमा सरस्वती थापा भने फिल्म ‘हिम्मतवाली’ को शो सञ्चालन गर्न केही महिनाको लागि त्यहाँ नै बसेकी छिन् ।
असोज १५ गते फूलपाती रिलिजको फिल्म ‘हिम्मतवाली’ मा रेखा स्वयम्को शिर्ष भूमिका छ । दुवै हात गुमाएर पनि सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका हिम्तवाला सुदर्शन गौतमाको रेखासँगै फिल्ममा मुख्य भूमिका छ । सुदर्शन पनि रेखासँगै अमेरिका गएर सँगै नेपाल फर्किएका छन् ।
हिम्मतवाला सुदर्शन र रेखाका कारण ‘हिम्मतवाली’ फूलपातीसम्म प्रतिक्षित बनेको छ । फिल्मको गीत संगीत एवं प्रोमोले अहिले चर्चा बटुलिरहेको छ ।